Xogo la-yaab leh oo ka soo baxaya Qaraxyadii Baladweyne | KEYDMEDIA ENGLISH
Xogo la-yaab leh oo ka soo baxaya Qaraxyadii Baladweyne
Waxaa sii xoogeystay wararka sheegaya in shaqsiyaadkii weerarrada is-miidaaminta ah ka fuliyay Baladweyne, ka tirsanaayeen ciidanka Haramcad oo u badan rag hore uga tirsanaa Al-Shabaab.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee Amniga Galmuudg, Axmed Macalin Fiqi, ayaa ka mid noqday dad badan oo muujinaya in labdii ruux ee isku qarxisay Baladweyne 23-kii bishaan, ay ka mid ahaayeen ciidankii dowladda ee labo bil ka hor la geeyay xarunta gobolka Hiiraan.
Waxaa jira war aysan jiritaankiisa xaqiijin karin Keydmedia Online, oo saacadihii danbe, si weyn u xoogeystay, kaas oo sheegaya in shaqsiyaadkii isku qarxiyay Baladweyne, ka tirsanaayeen ciidanka Dowladda Federaalka, gaar aha kuwa loo yaqaan Haramcad.
Xoguhu, waxa ay tilamaamayaan in labaduba hore kaga soo goosteen Kooxda Al-Shabaab, ka hor inta aan lagu darin Haramcad, oo ah ciidan uu Fahad Yaasiin dhisay, magaciisa oo af-Soomaali ahna u bixiyay, kuwaas oo u badan rag hore uga tirsanaa Al-Shabaab.
Bartamihii bishii Janaayo, ciidan laga daabulay Muqdisho, ayaa la geeyay Baldweyne, si ay meesha uga saaraan ciidan ka tirsanaa jabhad uu hoggaaminayay General Xuud, isla-markaana qeyb uga qaataan in Guudlaawe iyo Fahad Yaasiin tagaan magaalada.
Xildhibaan Fiqi, oo markii hore ka mid ah dadka aaminsan in dilka Allaha u naxariistee, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, uu ahaa min siyaasadeed, ayaa hadda ka mid noqday, shaqsiyaadka arrinkaan soo hadal qaaday, wuxuuna ku tilmaamay musiibo weyn.
“Haddii ay dhab noqoto in nafti-halligihii xildhibaan Aamino & dadkii la shahiiday isku qarxiyey uu ciidamada Beledweyne la geeyey ka mid ahaa waa musiibo weyn & dareen ku joog. Xaalkuna waa ka qoto-dheer yahay sida loo malaynayo”! ayuu yiri Fiqi.
Dhawaan Keydmedia Online, ayaa baahisay, xogo ay la wadaageen ilo sirdoon oo muhiim ah, kuwaas oo ku dooday in dableydii weerarka ku qaadday garoonka diyaaradaha Arbacadii hore ay ka tirsanaayeen hay’adda NISA, kuwaas oo hore uga yimid Al-Shabaab.
War-bixinnada la xariira weerarradii Muqdhiso iyo Baladweyne ka kala dahacay Isbuucii hore, waxa ay muujinayaan, jiritaanka shirqoollo siyaasadeed iyo in hay’adaha amnigu maleegeen weerarrada iyaga oo ku ganbanaya magaca faraca Al-qaacida ee bariga Afrika.
Afartii sano ee la soo dhaafay waxaa taagnaa dood ku saabsan, in uu jiro isku milan hay’adaha amniga iyo Al-Shabaab ah, waanaa sheekooyin jiritaan ahaan xaqiiqo noqon kara, marka la eego dhacdooyinka is dabayaalla ee hadda bannaanka u soo baxaya.
Dowladda soo socota, waxa ay dhibaato xooggan ka mari doontaa, sida ay u kala saari lahayd, ciidanka Dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ee isku dhex qasan, kuwaas oo ay isku mileen Fahad iyo saraakiil kale, oo dano gaar ah leh.